FJKM Ambodihady Vaovao : hanomboka ny vokatry ny sampana sekoly alahady | NewsMada
FJKM Ambodihady Vaovao : hanomboka ny vokatry ny sampana sekoly alahady
Araka ny fandaharana ao an-toerana, ity volana febroary manontolo ity no natokan’ny FJKM Ambodihady Vaovao Ambohimanarina ho vokatry ny sampana sekoly alahady. Fantatra fa hanomboka rahampitso izany fanamarihana izany. Tolakandro, lavanty an-kira hiarahana amin’ireo antoko mpihira avy ao anatiny toy ny Ny Antso, Asafia, STK, Fanantenana, sns, sy ny avy any ivelany ahitana ny Amboarapeon’ny Betela Ambodimita.
Ny 11 febroary, fiaraha-mivavaky ny 12 trano Ambohimanarina, tontosaina ao amin’ny FJKM Ambohimandroso Alfa sy Omega. Ny 12 febroary ka hatramin’ny 19 febroary, isaky ny amin’ny 6 ora hariva, velakevitra : « Sekoly alahady sy ny tenin’Andriamanitra. Mihainoa ny tenin’ny Tompo ». Hisy lohahevitra maromaro hohazavain’ireo mpanompon’Andriamanitra amin’izany.
Ny 17 febroary, tafika masina ankalamanjana hiarahana amin’i Zoky David’s. Alahady 18 febroary, fanamarihana ny faha-30 taon’ny sekoly alahady mihira Ambodihady (S.a.mi.a). Hamaranana ny fotoam-bokatra, rindran-kira natao hitorina an’ Andriamanitra hiarahana amin’ ireo ankizy mpianatra sekoly alahady.